marqaati | Baal 2
Hubka Dowlada OO Si Cad Loo Iibiyo
Bilalki la soo dhaafay waxaa isa soo taraysay amni xumida ka taagan magaalada Muqdisho iyo koonfuurta Soomaaliya. Mid ka mid ah sababada amni darida keenaya baa ah dhaqdhaqaaqa hubka ee magaaloyinka Soomaaliya ee dowlada dhexe gacanta ugu jidha.
Sidi loo baari lahaa arrintaan, baa hay’ada marqaati fulisay eegid qaadatay 3 todobaad kaasi oo lagu eegayay suuqa ugu furan ee hubka lagu iibiyo magaalada Muqdisho
Suuqaan hubka baa ku yaala wadada gadaal ee Safari Hotel, agagaarka KM5. Eeg qariiradaan si aad u aragto goobta suuqa ku yaalo. Waxaa jira goobo kale ee magaalda ka tirsan kuwaasi oo hub lagu iibiyo; marqaati waxay u dooratay suuqaan maadaama uu yahay midka ugu fudud ee aan qarsoodi lahayn.
Hoos ka ee qariirada halka aay ku taalo suuqa hubka:
Eeg Mogadishu Arms Market iyadoo qariirad weyn ah.
Hoos ka eeg qaar ka mid ah sawirada aan ka soo qaadnay suuqa hubka:
Jid gooyadaan ba ka sokeeysa suuqa hubka ee Hotel Safari gadaashiis.
Tujaarta hubka oo si bareer ah u kala gadanaya bastoolad TT ah.
Tujaarta hubka oo qori AK-47 ahi ku kala iibsanaya dukaan dhexdii.
Askari la hadlaya mid ka mid ah tujaarta hubka.
Akari laba AK-47 heysta. Inkastoo meeshaan aysan aheyn Safari hotel agteyda, waxay muujinaysaa in ay jiraan askar hal qoray ka badan heysata.
Tujaarta hubka baa darbiyada fariista iyafa oo sugaya dad hub iibinaya ama iibsanaya.
Mutadawiciinta marqaati baa eegay suuqan banaan ee hubka min 5ta bisha labaad ilaa iyo 27da bisha labaad sanadkaan 2014. Waxaan aragnay waxyaabaha hoos ku xusan:
Niman ku labisan dareyska askarta dowlada baa hubkooda ka iibiya tujaarta hubka; tujaarta hubka waxay hubka ka sii iibiyaan tujaar kale iyo bulsho weynta.
Kala iibsiga hubka iyo rasaasta waxay dhacdaa iyada oonan la isku dayin xitaa in la qariyo, taasi oo muujinaysa sharci dari ka jidha qalbiga magaala madaxda, iyo kalsoonida ay ku qabaan tujaarta hubka in ay dowlada waxba aysan ka qabaneyn.
Tujaarta hubka iyo askarta hubka iska iibinaya mararka qaarkood waxa ay ku dhamaysataan ganacsigooda dukaamada ku yaala agagaarka suuqa hubka. Isla dukaamadaas baa la filayaa in ay ka dhacdo kala wareejinta lacagta.
Tujaarta hubka baa la arkay iyaga oo hubkooda u dhiibanaya wardiyeyaalka hubeysan ee ka ag dhaw suuqa hubka.
Hubkaugu badan ee lakala iibsado baa ah Ak-47 iyo rasaastiisa, iyo TT bastoolad iyo rasaasteeda.
Si loola dagaalamo dhibaatadaan, marqaati waxay soo jeedin waxyaabaha hoos ku xusan:
Dawlada Soomaaliya in ay baarto suuqa madaw ee hubka lagu iibiyo eek u yaala KM5, talaabane ka qaado.
Dawlada Soomaaliya waa in ay tira koobtaa hubka u xaraysan, sameysaane kormeer joogto ah si loo xaqiijiyo in hubka aanan la iibinin.
In la sharciyeeyo lana dhaqan geliyo amarki dawlada ee ahaa in lala wareegayo hubka ay sitaan rayidka iyo dad dhar rayid sita.
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Maarso 6, 2014 uu qoray Maxamed Mubarak.
7 years, 9 months, 28 days, 18 hours, 23 minutes ago